လိင်ကိစ္စမပါဘဲ လက်တွဲဖော်အချင်းချင်းရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်နိုင်မလား | Duwun
လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ရင်းနှီးမှုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် ရင်းနှီးမှုမရှိဘဲလည်း လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကို ဘယ်လိုနားလည်လက်ခံထားသလဲ? ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ရင်းနှီးမှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်နေကြသလဲ?
ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် လူတိုင်းစီမှာအဖြေတစ်မျိုးစီရှိနေကြမှာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ရင်းနှီးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ခက်ခဲသလို တည်ဆောက်ယူရာမှာလည်းနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနေကြတာပါပဲ။
Photo: Dirty Tip
အချစ်အကြောင်းနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေအကြောင်းသင်ကြားတဲ့အခါမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းက လက်တွဲဖော်တွေအကြား ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေတယ်လို့ သင်ကြားခံဖူးကြမှာပါ။ လူအများစုက လိင်ဆက်ခံခြင်းကို ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းလို့နားလည်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါကမှားယွင်းတဲ့ယူဆချက်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ရင်းနှီးမှုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် ရင်းနှီးမှုမရှိဘဲလည်း လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Date မှာ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်တာ၊ ကော်ဖီဆိုင်ကလေးမှာအတူထိုင်ဖြစ်ကြရင်း ရင်းနှီးမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
လက်တွဲဖော်တွေအကြား ရင်းနှီးမှုရစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေနဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေများစွာရှိသလို ကိုယ်ပိုင်ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းအများစုက ကိုယ်တိုင်အသုံးတည့်ပေမယ့် အခြားသူကိုလမ်းညွှန်တဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်လူတွေအသုံးမတည့်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ လူသားတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးပါရစေ။
အများကြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ်အယုံအကြည်ရဆုံးလူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ခံစားချက်တွေမျှဝေတဲ့ အချိန်က လူတိုင်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခိုက်အတန့်ပါ။ တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို အမြဲနားလည်သူ၊ ကိုယ်ခံစားရချိန်တိုင်း နားထောင်ပြီးမျှဝေခံစားပေးတတ်သူတစ်ဦးရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်က ရှိသမျှတံတိုင်းတွေရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါပဲ။
ဟန်ဆောင်ကွယ်ဝှက်စရာဘာမှမရှိတော့ အချိန်က လူ့ဘဝမှာ အလွတ်လပ်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးခံစားချက်ပါ။ လက်တွေဖော်တွေအကြားမှာ ဘာဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုမှမရှိတော့အချိန်က စိတ်လှုပ်ရှားစရာအခိုက်အတန့်လို့ ဆိုပါရစေ။
ကိုယ့်ဘဝအတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်အစီအစဉ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အသစ်စမယ့်လုပ်ငန်းအကြောင်းကို လက်တွဲဖော်နဲ့အတူတိုင်ပင်ပြီး ဉာဏ်ရည်ဖလှယ်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်နားထောင်မယ်၊ ဆွေးနွေးမယ်၊ အကြံဉာဏ်တွေမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် မတူညီတဲ့ရှုထောင့်က အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရလာနိုင်သလို နှစ်ယောက်သားဆက်ဆံရေးမှာလည်း အပြန်အလှန် လေးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်။
လုပ်ငန်းသဘောမျိုးဆွေးနွေးချိန်တွေမှာ နှစ်ဖက်စလုံးစိတ်ဝင်စားမှုရှိရင် ရံဖန်ရံခါ မိုးလင်းပေါက်ထိုင်စကားပြောနေတာမျိုးအထိကို ရင်းနှီးမှုရလာစေတတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ စုံတွဲတွေအကြားမှာ ထိတွေ့မှုဆိုတာကလည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအတွက် တကယ်လိုအပ်စေတဲ့အရာပါ။ ပွေ့ဖက်တာ၊ နမ်းတာ၊ လက်ကလေးကိုကိုင်ထားပေးတာ၊ လိင်ဆက်ဆံတာ စတာတွေက အချစ်ရဲ့သင်္ကေတတွေပါ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နွေးထွေးတဲ့ထိတွေ့မှုတိုင်းက ခိုင်မာတဲ့ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးပွားစေပါတယ်။